सावधान ! काठमाडौमा बढ्दैछ अनौठो घटना, डेराका लागि कोठा खोज्दै आउनेहरु लु’टे’रा र ह’त्या’रा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! काठमाडौमा बढ्दैछ अनौठो घटना, डेराका लागि कोठा खोज्दै आउनेहरु लु’टे’रा र ह’त्या’रा
काठमाडौमा अनौठा घटना बढ्न थालेका छन् । कोठा खोज्ने बहानामा आउने युवाहरुले लु टे र हिडेको घटना सेलाउन नपाउँदै भक्तपुरमा जग्गा किन्ने वहानामा पुगेका तीन जनाले एक जनाका ज्यान नै लिएका छन् ।
दुई महिनाअघि दुई युवक कोठा खोज्दै पेप्सीकोलास्थित एउटा घरमा पुगे। पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्ट नजिकै घर भएकी पवित्रा विडारी उप्रेतीको घरमा डेरा खोज्दै पुगेका दुई जनाले उनको सिक्रि लु टे र भा गेका हुन् । भुँईतल्लामा रहेको दुईवटा कोठा मासिक १० हजार तिर्नेगरी डिल भएपछि उनीहरुले सोधे– ‘घरमा को–को बस्छन् रु’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
घरधनी पवित्राले दोस्रो तल्ला भाडामा दिएको र तेस्रो तल्लामा छोरो बस्ने जानकारी गराएपछि उनीहरुले ‘सुन, पैसा सवै नदिए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिए । त्यसपछि उप्रेतीले डराएर १ तोलाको सिक्री फुकालेर दिइन् । सिक्री लिएपछि दुईजोर चप्पल छाडेर लु टे रा स्कुटरमा भा गेको बताइएको छ । ‘घर नै लु टे को’ खबर आएपछि प्रहरी उनको घरमा पुगेको थियो ।
लकडाउन अझै ७ देखि १० दिनका लागि थप्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय !